I-Himalayan Hamlet - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAshish
Ibekwe kwidolophana yaseJakheta kwisithili saseAlmora, le ndlu izidla ngokubona kakuhle iHimalayas. Ngeentsasa zakho apha ziza kuqala ngesandi esichukumisayo seentaka nobusuku kunye nesibhakabhaka esineenkwenkwezi ezininzi.
Yindlu enemigangatho emibini, apho sihlala khona kumgangatho osezantsi kwaye undwendwe lunokufikelela kuwo wonke umgangatho wokuqala oquka ibhalkhoni enkulu, amagumbi amabini, ikhitshi negumbi lokuhlambela. Ukusuka ebhalikhoni, ungabona yonke i-Trishul, i-Nandadevi, kunye ne-Nanda Kot range.
I-Wifi – i-34 Mbps
Seta kwidolophana yaseJakheta. Le ndlu ayifumaneki lula kwiindawo eziphambili ezikufutshane nezorhwebo zesixeko. Ikufutshane ne-Mrig Vihar Zoo (2km), i-Kasardevi (5km), i-Jageshwar Dham (33km) kunye neNanda Devi Temple (4km).
Ukuba ungumntu othanda ukunyuka intaba, iBinsar neSimtola yinto ekufuneka uyenze.
Ungahamba ngeenyawo ixesha elide emoyeni ococekileyo, phakathi kweendlela ezintle zasezintabeni, iiOaks eziphakamileyo kunye neNgqungquthela.
Ukuba unomnqweno wokubhabha phezulu ukuze ubone iHimalayas kunye nehlathi eliluhlaza, ungaya kwi-paragliding ekwikhilomitha ezingama-20 ukusuka kwindawo yethu.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Almora Range